Ardayda ku meel gaarka ah ee Bridge Transition waxay xaaqaan tartanka Minnesota SkillsUSA | Faahfaahinta Wararka Degmada - Dugsiyada Dadweynaha ee Deegaanka Hargabku ISD 834
Ardayda wax ka barata barnaamijkeena ku-meel-gaadhka ah ee Bridge Bridge waxay ku soo bandhigeen natiijo guul leh shirkii SkillsUSA Minnesota Championships and Leadership Conference. Waxay xaaqeen tartankii Nidaamka Codsiga Shaqaalaynta iyada oo Nevyn Pflugradt ku guuleysatay dahab, Chazz Massey oo helay lacag iyo Juan Malon oo la siiyay naxaas.
SkillsUSA waa iskaashi ay yeeshaan ardayda, macalimiinta iyo warshadaha oo wada shaqeeya si loo hubiyo in Mareykanku leeyahay shaqaale xirfad leh. Ururku wuxuu bixiyaa barnaamijyo waxbarasho, dhacdooyin iyo tartamo taageera xirfadaha iyo waxbarashada farsamada ee fasallada qaranka.
Barnaamijkeena Kala-guurka Buundada wuxuu u oggol yahay ardayda naafada ah 18- illaa 21-sano fursad dheeri ah oo lagu horumariyo nolosha iyo xirfadaha shaqada iyo helitaanka kalsooni.